चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नवौँ महिना नाघ्दा पुँजीगत खर्चमा केही सुधार,कहाँ कति खर्च भयो त? | Samacharpati चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नवौँ महिना नाघ्दा पुँजीगत खर्चमा केही सुधार,कहाँ कति खर्च भयो त? – Samacharpati
चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नवौँ महिना नाघ्दा पुँजीगत खर्चमा केही सुधार,कहाँ कति खर्च भयो त?
चालु आर्थिक वर्ष २०७७्र/७८ को ९ औं महिना (साउन–चैत) नाघ्दा पुँजीगत खर्चमा केही सुधार देखिएको छ ।
कोरोना महामारीको प्रभावका बीच गत आवको तुलनामा पुँजीगत खर्चमा सुधार देखिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । चालु आवको चैत मसान्तसम्म कुल पुँजीगत खर्च वार्षिक लक्ष्यको २९।२२ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को यसै अवधिमा पुँजीगत खर्च लक्ष्यको २५।८८ प्रतिशत रहेको थियो ।
सो आवमा चैतपछि मात्र महामारीको असर परेको थियो । तर, पूर्वतयारीविना अकस्मात लकडाउन गर्नुपरेका कारण गत खर्च खर्चमा नकारात्मक असर परेको हो । चालु आवको सुरुवाती दुई महिना ९साउन–भदौ०मा लकडाउन यथावत रहेको थियो । असोजपछि भने आर्थिक गतिविधि चलायमान भएका थिए । तथ्यांक अनुसार ९ औं महिनाको अन्त्यसम्म कुल पुँजीगत खर्च १ खर्ब ३१ करोड रुपैयाँ भएको छ ।
चालु आवको सकिन तीन महिना बाँकी रहेको अवस्थामा कुल बजेट खर्च भने ४६.५६ प्रतिशत नाघेको छ । चैत मसान्तसम्म कुल बजेट खर्च ६ खर्ब ८६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।यसमध्ये चालु खर्च ५ खर्ब २५ अर्ब ९४ करोड पुँजीगत १ खर्ब ३१ करोड र वित्तीय व्यवस्थामा ५७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो खर्च क्रमशः कुल लक्ष्यको ५५.४२, २९.२२ र ३३.३३ प्रतिशत प्रगति हो । यो वर्ष सरकारले कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन पुँजी रहेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु आवको राजस्व भने करिब लक्ष्यको नजिक नजिक उठीरहेको छ । ९ औं महिनाको अन्त्यसम्म राजस्व संकलन ६ खर्ब ८३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । यो लक्ष्यको ६७.५९ प्रतिशत हो । यसबीचमा कुल सरकारी आय भने ७ खर्ब २९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तो आयमा सरकारले लिएको आन्तरिक तथा बाह्य ऋण भने जोडिएको छैन । तर, अनुदान भने जोडिन्छ ।
निलिमा पुनको ”एउटै काखमा हुर्केथ्यौं हामी” सार्वजनिक (भिडियो सहित)
चन्द्रागिरिमा नौ व्यक्तिमा आरडिटी रिपोर्ट पोजेटिभ